Pogba+Eden Hazard ⇒ Real Madrid, Koulibaly⇒Man United, Timo Werner⇒Liverpool Iyo Wararkii Kale Ee Suuqa Kala Iibsiga. - (HILLAAC.NET) THE BEST INDEPENDENT RELIABLE SOMALI NEWS
Pogba+Eden Hazard ⇒ Real Madrid, Koulibaly⇒Man United, Timo Werner⇒Liverpool Iyo Wararkii Kale Ee Suuqa Kala Iibsiga.
May 14, 2019 at 12:02 Pogba+Eden Hazard ⇒ Real Madrid, Koulibaly⇒Man United, Timo Werner⇒Liverpool Iyo Wararkii Kale Ee Suuqa Kala Iibsiga.2019-05-14T12:02:19+01:00 CAYAARAHA
Xiddiga kooxda Chelsea Eden Hazard oo 28 sanno jir ah ayaa dhameystiri doona heshiiska 86da milyan ginni ee uu ugu wareegayo Real Madrid ka dib ciyaarta finalka Europa League. (L’Equipe)
Real Madrid ayaa u soo bandhigtay Tottenham fursad ay kula wareegto xiddigoodii hore Gareth Bale oo ay ku qaadanayaan heshiis amaah ah oo 10 milyan ginni ah. Kooxda reer Spain ayaa sidoo kale dooneysa in Spurs ay bixiso kala bar mushaharkiisa oo gaaraya 600 kun ginni isbuucii. (The Sun)
Paris St-Germain ayaa isha ku heysa seddexda xiddig ee Real Madrid Gareth Bale, Isco iyo Toni kroos. (AS)
Real Madrid ayaa dalab 140 milyan yuro ah ku doonaysa Pual Pogba oo diyaar u ah in uu Man United ka baxo. United ayaa hoos uga soo deg degtay qiimihii 160 ka milyan ahaa ee ay ku doonaysay Pogba. (Balon Dalon). Akhriso faah faahinta.
Gudiga baaritaanka UEFA ayaa u soo jeedin doona UEFA in Manchester City laga mamnuuco Champions League muddo sannad ah ka dib markii ay ku xadgudbeen sharciga dhaqaale wanaaga kooxaha Yurub, go’aankan ayaa saamayn ku yeelan kara qorshaha suuqa ee Man City. (New York Times)
Kooxda hanatay horyaalka Premier League ee Manchester City ayaa qorsheyneysa inay 200 milyan ginni xagaagan ku qarashgareeyeen suuqa kala iibsiga madaama ay sidoo kale halis ugu jiraan in suuqa kala iibsiga xayiraad laga saaro. (Daily Mail) Akhriso xidiga ay Man City doonayso.
Xiddiga khadka dhexe ee England Ruben Loftus-Cheek oo 23 sanno jir ah ayaa kaliya qandaraas cusub u saxiixi doona Chelsea haddii ay u balan qaadaan boos joogta ah. (The Sun)
Atletico Madrid ayaa kulan la yeelan doona weeraryahanka Faransiiska Antoine Griezmann isbuucaan, iyadoo koxoda ay ka cabsi qabto in 28 jirkaan uu durbaba ogolaaday inuu ku biiro Barcelona. (Cadena Ser)
Tottenham ayaa ku dhow inay heshiis 25 milyan ginni ah kula soo wareegto 18 jirka daafaca bidix ee kooxda Fulham, Ryan Sessegnon. (Daily Mail)
Daafaca Tottenham Jan Vertonghen oo 32 jir ah ayaa kalsooni ku qaba inuu ka soo kabsan doono dhaawac canqowga ah ka hor finalka Champions League ee ay la ciyaarayaan Liverpool 1da bisha Juun. (The Guardian)
Manchester United ayaa ka dhigatay daafaca Napoli iyo xulka Senegal ee Kalidou Koulibaly oo 27 jir ah bartilmaameedkooda koowaad ee xagaaga. (Daily Mirror)
United ayaa sidoo kale qorsheyneysa inay 45 milyan ginni ku qarashgareyso soo xerogelinta xiddiga garabka ka ciyaara ee kooxda Lille iyo Ivory Coast 23 jirka Nicolas Pepe. (Daily Mirror)
Manchester City ayaa laga soo diiday dalab ay ka gudbiyeen 22 jirka khadka dhexe ee kooxda Lyon, Tanguy Ndombele. (Le 10 Sport)
Madaxa maamulka RB Leipzig ayaa sheegay in Liverpool ay weli la wareegi karto 23 jirka weerarka ah ee Jarmalka u dhashay Timo Wener madaama aysan kooxda weli wadahadalo la gelin Bayern Munich. (Liverpool Echo)
Barcelona ayaa filaneysa inay dalab ka helaan Chelsea oo ku aadan xiddiga reer Brazil Philippe Coutinho oo 26 sanno jir ah haddii kooxda Premier League ganaaxeeda suuqa kala iibsiga dib loo dhigo. (Goal)
Xiddiga khadka dhexe ee Arsenal Mesut Ozil oo 30 jir ah ayaa sheegay inuusan dooneynin inuu ka tago kooxda. (Dazn Dach)
Everton ayaa loo soo bandhigay fursad ay kula wareegi karto 26 jirka khadka dhexe Portugal iyo kooxda inter Milan Joao Maria kaasoo ay ku heli karaan 15 milyan ginni. (Daily Mail)
Real Madid ayaa u sheegay goolhayaha reer Costa Rica 32 jirka Keylor Navas inuusan qeyb ka aheyn qorshahooda xilli ciyaareedka danbe. (Marca)
« XOG: Eden Hazard Oo Markale Isku Qoray Liiska Halyeeyada Premier League & REKOODH Kaliya Saddex Xiddig Uga Horreeyeen Oo Uu Gaadhay.
Gabar Soomaali 16 Sano Jir ah Oo Shaqo Adag Ka Qabatay Wadanka Norwey »